Xubinta cusub ee Komishanka oo Madaxtooyada lagu dhaariyey iyo Baaq Guddoomiyaha Komishanku jeediyey | Somaliland.Org
May 28, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Cali Maxamed Cabdulle oo dhowaan xisbiga KULMIYE u soo magacaabay inuu xubin ka noqdo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, isla markaana Golaha Wakiilladu ansixiyey ayaa maanta lagu dhaariyey Madaxtooyada.
Baaqa Komishanka Dhinaca kale, Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Maxamed Ismaaciil ayaa ugu baaqay hoggaamiyayaasha isku haya siyaasadda Somaliland in aanay wakhti dambe ku lumin “Hadal iyo is-horfadhi”, isla markaana ay ilaaliyaan wakhtiga loo dhigay doorashooyinka iyo diiwaangelinta ee la isla qaatay.
Guddoomiyaha Komishanka oo shalay u warramayey telefishanka madaxa bannaan ee Horn Cable Tv, waxa uu soo dhoweeyey wadahadalada u socda xukuumadda wakhtigeedu dhammaaday iyo madaxda xisbiyada Mucaaridka ah, kaas oo waxoogaa horumar ah lagaga gaadhey khilaafkii cakirnaa ee ka dhashay dib u dhaca doorashooyinka iyo dhammaadka muddada xilka Madaxweynaha, waxana uu rajeeyey in kulankii shalay loo ballansanaa ee baaqday lagu soo gebagebeeyo wadahadalka.
Guddoomiyaha oo telefishanku waraystay wax yar ka dib kulan albaabadu u xidhan yihiin oo uu la yeeshay Madaxda xisbiyada mucaaridka ah iyo xubno ka socdey Akadeemiyada Nabadda iyo Horumarinta, wuu diidey inuu wax war ah ka bixiyo arrimaha ay kulankaa kaga wadahadlayeen. Sidoo kale, madaxda xisbiyada mucaaridka ayaa iyaguna ka gaabsaday inay wax war ah ka bixiyaan.
Hase yeeshee, warar isa soo taraya oo laga helay ilo ku dhowdhow masuuliyiintaas ayaa sheegaya in kulankaa lagaga wadahadlayey in la kala hormariyo doorashooyinka oo la isla wada qaato in doorashada Madaxtooyada la soo hormariyo lana qabto 15ka Dec. taas oo ay xisbiyada mucaaridku ku doodayeen, balse, Daahir Riyaale iyo xisbigiisa UDUB diiddan yihiin.
Waxaana la sheegay in cadaadis iyo talooyin dhinacyo badan lihi ay ku imanayaan dhinacyada arrintani khusayso, haatanna ay bilaabantay wada-xaajood ku saabsan sidii dhinacyada oo dhami ay isula qaadan lahaayeen in doorashada Madaxtooyada lasoo hormariyo.
Wararku waxay sheegayaan in Komishanka iyo dhinacyada kale ee ku lugta leh wadahadalada hoggaamiyayaasha siyaasaddu ay hadda dedaal ugu jiraan sidii ay Daahir Riyaale ugu khasbi lahaayeen inuu saxeexo in la soo hormariyo doorashada Madaxtooyada.
Wadahadalada Daahir Riyaale iyo xisbiyada mucaaridka ah oo lagu gaadhey heshiis qabyo ah oo nuxurkiisu yahay in doorashooyinku dalka ka qabsoomaan wakhti lagu heshiiyey oo ah Dec. 15 2008 iyo March, 15 2009. Hase yeeshee, dad badan ayaa ka werwersan sida mudane Riyaale uga dhabaynayo dammaanadqaadka xisbiyada mucaaridka ah doonayaan in loo sameeyo in doorashooyinku ku qabsoomaan wakhtigaas.